Miresaka momba ny fandrosoana ao Sierra Leone ireo mpianatra TBCS · Global Voices teny Malagasy
Miresaka momba ny fandrosoana ao Sierra Leone ireo mpianatra TBCS
Voadika ny 13 Septambra 2018 6:36 GMT
Ny tetikasa The Think Build Change Salone (TBCS) dia mikasa hanampy amin'ny fanarenana indray an'i Sierra Leone taorian'ny ady an-trano amin'ny alalan'ny fanomezana fiofanana ho an'ireo tanora napetraka tany amin'ny (sekoly) fianarana asa mandray karama nataon'ireo fikambanana tsy mitady tombontsoa ao an-toerana mba hahafahan'ireo tanora mahazo fizaran'asa sy mandray anjara amin'ny tetikasa fampandrosoana.
Nanazava ireo fanamby atrehiny sy ny fomba nahafahany nandresy izany ny olona ao ambadik'ity tetikasa ity, Vickie (AKA “Nasratha”):
“Iray amin'ireo fanamby goavana indrindra fantatro fa natrehako tamin'ny fandaharam-pianarana ny fametrahana ireo mpianatra tany amin'ireo fikambanana eo an-toerana. Heverina avy hatrany ho andraikitra, trosa na vesatra ao amin'ny tontolon'ny asa matihanina ireo mpianatra tsy manana traikefa saingy fantatro ihany koa fa manaisotra ny ampahan'ny fahatsapana mamely ny mpianatra (anti-intern) ny fandoavana ny fandanian'ny mpianatra .
… Tsy nahazo ny lisitra tadiaviko aho ka tsy maintsy niverina tao amin'ny aterineto mba hitady FTMF na ONG ao an-toerana. Nitsidika birao maromaro izay nikatona nandritra ny roa na telo taona mahery aho ary tsy mba nisy olona nisahirana hanaisotra marika famantarana. “
Edward Komba Chaka (23 taona) dia mpianatra taona faharoa momba ny fitsaboana ao amin'ny Kolejin'ny Siansa ara-pitsaboana sy ara-pahasalamana (COMAHS). Napetraka tao amin'ny Programa Nasionaly Miady amin'ny VIH/ SIDA(NACP) ao amin'ny Hopitaly Connaught, Freetown izy. Manazava ny traikefany arak'asa izy tao amin'ny lahatsoratra hoe “Viriosy ny VIH, fa tsy olana ara-moraly izy. Mizara teny filamatra somary manintona izy mba hisorohana ny sida
Noah Dauda (25 taona) kosa dia mpianatra taona fahatelo ao amin'ny Sampana Ara-bola ao amin'ny Ivom-pampianarana Fitantanana sy Fitantanam-panjakana (IPAM) ary niara-nikaroka ny fampiharana ny micro-finance [famatsiam-bola madinika] any Freetown i Alhassan Conteh, 22 taona, mpianatra taona voalohany ao amin'ny Ivom-pampianarana Fandraharahana sy Fitantanana DES. Nizara ny toetry ny fampandrosoana sy ny tontolon'ny fandaharan'asa fampindramam-bola madinika any Sierra Leone i Noah:
“Niaina taha ambony amin'ny tsy fahombiazan'ireo tetikasa fampandrosoana nandritra ny taona maro i Sierra Leone. Tsy nanomboka tamin'ny fiandohan'ny ady an-trano ireo tsy fahombiazana ireo. Tsara ho marihina fa, ny tsy fisian'ny fandrosoana nandritra ny taona maro, ny fihenan'ny fidiram-bola ho an'ny isam-batan'olona, ​​ny fitombon'ny fifaninanana eo amin'ny vahoaka mihamitombo isa ho an'ny harena voafetra sy ny fitantanana ratsy no nanampy betsaka ny fanimbana ny fiarahamonim-pirenena sy ny fisian'ny toe-javatra izay nanamora ny fisokafan'ny ady. Izany zava-misy izany no nezahin'ny governemanta niadiana tamin'ny Drafitr'asany Nasionaly ho an'ny Fanamaivanana ny Fahantrana, ny fandaharan'asany momba ny fanavaozana ny toekarena lehibe notohanan'ny fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana ary ny politikany ho fanohanana ny sehatra tsy miankina.”
Mamaritra ny rafitra fampindramam-bola nentim-paharazany Osusu izy ary nandefa ny sarin'ireo mpivarotra sasany mampiasa fampindram-bola madinika.
Napetraka tamin'ny tetikasa mahaleotena i Noah Suluku (21 taona) sy Daniella Wilson (19 taona), mpianatra ambaratonga faharoa, mba hanasongadinana ny fiainan'ireo ankizy an-dalambe any amin'ny faritra samihafa ao an-tanàna. Nanoratra i Noah:
“Misy sokajy roa (amin'ireo ankizy an-dalambe). Ny sokajy voalohany dia faritana toy ny ankizy mijanona miaraka amin'ny ray aman-dreniny / mpiambina ao an-trano saingy mandeha eny an-dalambe isa-maraina mba hifanosona na hitady vola ho an'ny tenany ary indraindray mody amin'ny hariva izy ireo. Ny sokajy faharoa dia ireo ankizy izay nandao ny tranony ary mipetraka mandrakizay eny an-dalambe sy miasa eny an-dalambe. Tsy eo ambany fiahian'ny ray aman-dreny izy ireo. Samy marefo amin'ny fanararaotana ankizy tsy ampy taona sy ny fanitsakitsahana ny zon’ ny ankizy ireo sokajy roa ireo. “
Nanamarika ny fahantrana sy ny fiainan'ireo ankizy an-dalambe izy. Nandefa sary sasantsasany misy ireo ankizy sahirana ihany koa izy.
Kadi Yata Kandeh (26 taona) dia mpianatra taona fahatelo momba ny Fivelomana ara-tsakafo sy ny fifidianana sakafo ara-pahasalamana ao amin'ny Kolejy Fourah Bay. Nanoratra ny zava-niainany tao amin'ny Kaonferansa mikasika ny Satan'ny Fampiharana ny VFF- Vaomieran'ny Fahamarinana sy ny Fampihavanana izy amin'ny maha-mpikambana azy ao amin'ny Komity Ara-teknikan'ny Fandrindrana:
“Fandaharan'asa fanabeazana izany, nanome ahy varavarana misokatra hahafantatra ireo fikambanana fiarahamonim-pirenena samihafa sy hifanerasera amin'ny maro. Ny zavatra tena nahaliana ahy dia ny fifanakalozan-kevitra mikasika ireo lohahevitra samihafa teo amin'ireo vondrona fiarahamonim-pirenena. “
Farany dia namaky vaovao farany avy amin'i Emmanuel Joseph (24 taona), mpianatra ao amin'ny Oniversite NJala izay nianatra asa tao amin'ny Programan'ny Orinasa Fandriampahalemana sy ny Fampandrosoana, tetikasa teo ambanin'ny fitantanan'ny Vaomieram-pirenena ho an'ny hetsika sosialy (NaCSA) izy. Mitanisa ireo zava-niainana nangonina nandritra ny diany tany amin'ny faritra atsinanana, avaratra sy atsimon'i Sierra Leone izy ary namehy hoe:
My documentary visit to the provinces have actually increase my understand(ing) of the provinces and how decentralizing work is being complemented by council and how working condition is like and the challenges of the different kind of bosses that one may encounter during work. Amazing among my discovery of Sierra Leone is that my country is a beautiful country and such build my interest of working in Sierra Leone to aid in developing my country.
Mampitombo tokoa ny fahatakarako ny faritany sy ny fiasan'ny fitsinjaram-pahefana notanterahan'ny vaomiera sy ny fepetran'ny asa sy ny fanamby miandry ireo karazana mpampiasa (sefo) mety hitranga mandritra ny asa ny fitsidihana fanadihadiana nataoko tany amin'ny faritany. Ny mahatalanjona teo amin'ny fahitako an'i Sierra Leone dia firenena tsara tarehy ny fireneko ary nandrafitra ny fahalianako hiasa any Sierra Leone ny tahaka izany mba hanampy amin'ny fampandrosoana ny fireneko.
19 ora izayAzia Afovoany sy Kaokazy